မိုဘိုင်းဖုန်းကဏ္ဍဆိုပြီး.... — MYSTERY ZILLION
March 2009 edited January 2011 in Idea
အမ်ဇက်မှာ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ပြောဆိုဆွေးနွေးတာတော်တော်လေးနဲနေပါသေးတယ်။ \_:D/ဒါကြောင့် ဖိုရမ်မှာ ကဏ္ဍသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းကဏ္ဍဆိုပြီးထည့်ရင်ကောင်းမလားလို့ပါ။ အဲဒီအောက်မှာ ဖုန်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ \_:D/ringtone တွေ၊ game တွေ၊ software တွေ\_:D/၊ ringtone ဖြတ်တဲ့ ဆော့ဖ်၀ဲလ်တွေနဲ့ သုံးပုံသုံးနည်းတွေ \_:D/၊ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကိုယ့်ဖုန်းပြဿနာတွေကို မေးမြန်းရင်း:77: ဖြေဆိုရင်း :101: နဲ့ အမ်ဇက်က ပိုပြည့်စုံလာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းများအားလုံးထည့်သင့်၊ မထည့်သင့် ၀ုိင်းအကြံပြုပေးကြပါဦး။:77::77: မော်မော်မင်မင်များလည်း ထည့်သင့်မထည့်သင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးကြပါ။:77::77:
ကျွန်တော်တော့ ဒီလိုမျိူးလေးတွေကို နှစ်သက်သဘောကျတယ်ဗျ။ mz ကလည်း နည်းပညာ ဖိုရမ်လို့ ကြွေးကြော်ထားတယ်မဟုတ်လား။ ဘက်ပေါင်းစုံက နည်းပညာတွေစုေ၀းနေတဲ့ ဖိုရမ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန် ၀မ်းသာမိမှာပါ။
အဲဒါကဘာလည်းဆိုတော့ နည်းပညာတွေ ပိုစုံလာအောင်လို့ သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာ သရက်လေး ထပ်ဖွင့်ရရင်ကောင်းမလားလို့. . . .။
ကဏ္ဏ မဟုတ်ဘူး ကဏ္ဍပါ။
Thread name ကြီးမှာ မှားနေလို့ ပြင်ပေးပါနော်။
thread ပိုင်ရှင်က ဖွင့်ပြီးတော့ဘာမှလဲဆက်မပြောတော့ဘူး .. ကဲ ကျွန်တော်စမေးပြီဗျာ ..
ကျွန်တော် ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က GSM handset တစလုံးအသစ်လဲလိုက်တယ်ဗျာ .. ပြသနာကအဲဒီမှာစတာ .. ကျွန်တော့် handset အဟောင်းမှာ ရှိတဲ့ contact list က 60 ကျော်တယ်ဗျ .. အဲဒီလောက်များတဲ့ contact တွေကို နာမည်ရိုက်ထည့်လိုက် နံပါတ်ရိုက်ထည့်လိုက်လုပ်နေရင် တပတ်လောက်တောင်ပြီးပါ့မလားမသိဘူး .. အဲဒီဟာတွေကို handset အချင်းချင်း infrared တို့ bluetooth တို့ကနေ move လုပ်လို့ရလားသိချင်ပါတယ် . မရဘူးဆိုရင် ရတဲ့ software လေးများရှိရင်ပြောကြပါဗျာ .. လက်မညောင်းချင်လို့ပါ ..:100:
အရင်တစ်ခါ ကျွန်တော်ကတော့ Nokia နဲ့ SonyErricsson ကိုတော့ သူငယ်ချင်းနဲ့ လဲတုံးကတော့ ဘယ်လိုလုပ်လိုက်သလဲဆိုတော့ အရင်ဆုံး သူတို့မှာပါတဲ့ Software နဲ့ ကွန်ပျူတာထဲကူးထည့်လိုက်တာ ပြီမှ ဟိုဘက်သည်ဘက် ပြန်ကူးထည့်လိုက်တာပဲ။ ဘာ Software မှထွေထွေထူးထူးသုံးမနေပါဘူး သူ့ Model သုံးရမယ့် Software တွေ သူတို့ Web Site မှာတင်ထားတာပဲဟာ ယူပြီးသုံးလိုက်ပေါ့။ ဖုန်းအချင်းချင်းလည်း ရတာပဲဟာ ဘာမှတောင် လုပ်စရာမလိုဘူး။ SonyErricsson ဆိုရင်တော့ Contact တွေကို Multiple Select လုပ်ပြီးတော့ Sent Contact ကနေ Bluetooth နဲ့ပို့လည်းရတာပဲဟာ။ Nokia တော့အခုလက်ထဲမရှိလို့ မပြောတတ်ဘူး။:D
ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်ကိုလေးလေး..။ ကျွန်တော်လဲ မနေ့က ကိုလူပျိုကြီးပြောလို့သိပြီးပါပြီ။ thread name ကိုမပြင်တတ်လို့ပါ။ edit ကနေ စာသားတွေကို ပြင်ပြီးပါပြီ။ thread name ကို မပြင်တတ်လို့ မင်မင်မော်မော်များပြင်ပေးကြပါဦး။
အမှားထောက်ပြပေးတဲ့အတွက် အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စိတ်မဆိုးပါခင်ဗျာ.... ) )
contact တွေကို် sim card memory ထဲကို အ၇င်ရွှေ. အဲ.ဒီ sim card ကို ဖုန်းအသစ်ထဲကိုထည့် ပြီးရင် sim card က contact ကို phone memory ထဲပြန်ရွှေ.
မိုဘိုင်းကဏ္ဍလုပ်ပြီးဘာမှမပြောလို့ ဆိုသူများအတွက်ပို့စ်များလာပါပြီခင်ဗျာ..။ ရှုစားတော်မူကြပါဦး...။ ပိတ်မပစ်ရဘူးနော်... ။
ကျွန်တော်ကလည်း မိုဘိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဆရာတစ်ဆူမဟုတ်လေတော့ အင်တာနက်ဂျာနယ်မှ မိုဘိုင်းအမေးဖြေဏ္ဍကနေ ယူပြီးတော့ တင်ပေးပါ့မယ်။ ၀ယ်ဖတ်လည်းရတယ်ဆိုပေမယ့် အချိန်ကြာလာလေ ဒီမှာစုမိလေ ဖြစ်လာတော့ စာစောင်တွေလှန်လှောရှာနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့.. ။
မော်ဒယ်အနိမ့်ဖုန်းတွေမှာ Hash key မနှိပ်မိဘဲ ringtone သံ မထွက်တော့တာ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
မော်ဒယ်နိမ့်ဖုန်းတွေမှာ Hash key ကိုမနှိပ်ဘဲ ringtone သံပျောက်သွားတာက ဖုန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ ringtone file တွေမှာ အသံဖိုင်တွေမှာ ဖိုင်ကွဲသွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ringtone အသံဖိုင်တွေဟာ ringtone အသံပြုလုပ်ပေးတဲ့ နေရာမှာမရှိတော့ဘဲ အခြားမှတ်ဉာဏ်ထားရာနေရာတွေကို ဖိုင်ကွဲပြီး ရောက်ရှိသွားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင် ဖုန်းဆိုင်တွေကို သွားစရာမလိုပါဘူး။ မိမိဖုန်းကို ပါ၀ါပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်လိုက်ရင် ရနိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်များတာကတော့ 6063, 2660 အစရှိတဲ့ အနိမ့်ဖုန်းတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
3G အဆင့်မရှိတဲ့ GSM ဖုန်းတွေမှာ လိုင်းမတက်တာ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
3G အဆင့်မရှိတဲံ 6300၊ 6030 အစရှိတဲ့ ဖုန်းတွေမှာ GSM ကွန်ရက်မရဘဲ လိုင်းမမိဖြစ်နေတာက Sim Card ကြောင့်လဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဟန်းဆက်မကောင်းလို့ဖြစ်တာလဲ ဟုတ်ဘူး။တစ်ခါတစ်ရံကရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မိမိဖုန်းရဲ့ setting ထဲကို၀င်လိုက်ပါ။ call setting operation ဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအထဲမှာမှ automatic နဲ့ manual ဆိုပြီး နှစ်ခုရှိပါလိမ့်မယ်။ manual ကိုရွေးပြီး select နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် searching ဆိုပြီးလိုင်းရှာပါလိမ့်မယ်။ MPTGSM ဆိုပြီးလိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။(only for ဘန်းကျော် ) အဲဒါကို အိုကေနှိပ်လိုက်ရင် လိုင်းမမိတာကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။
Sim card ပျက်သွားတတ်တာ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ မပျက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါသလဲ။
Sim Card ပျက်သွားတတ်တာဟာ sim card ရဲ့ pim code ကိုမှားရိုက်မိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါက အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ မှားယွင်းမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မိမိဖုန်းလိုင်းလုံး၀ မသုံးရတဲ့ အထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ Sim Card ပျက်လို့ပြန်ဖော်မယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံမြောက်မြားစွားကုန်ကျနိုင်သလို အချိန်လည်းကုန်နိုင်ပါတယ်။ မပျက်အောင်တားဆီးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါက menu ထဲမှာရှိတဲ့ setting ထဲက security pin code ကို on လိုက်ရင် zero ငါးလုံးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲဒီအထဲမှာ နံပါတ်တွေ မရိုက်မိပါစေနဲ့။ အကယ်၍ သွားထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် sim card ပျက်ဖို့ သေချာသွားပါပြီ။ pin code ရိုက်နိုင်ခွင့်ကို သုံးကြိမ်မှားပိုင်ခွင့်ရှိပေမဲ့လည်း အချို့က လျှောက်နှိပ်ရင်းနဲ့ သုံးကြိမ်ကျော်သွားရင် သေချာပေါက် ပျက်ပါပြီ။ ဒါကြောင့် pin code တောင်းပြီဆိုရင် 12345 ကို်သာ ရိုက်ထည့်ပါ။ အဲဒါဆိုရင် မိမိ sim card ကို ကယ်တင်ရာရောက်ပါတယ်။
GSM ဖုန်းတွေမှာ Message ပို့လို့မရတော့တာ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
ဖုန်းတွေမှာ အ၀င် message သာရပြီး ရပြီးအထွက် မရတော့ခြင်းမှာ hand set မှာရှိတဲ့ service center ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို ချိန်းပေးမယ်ဆိုရင် ပြန်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် Nokia မှာ message ထဲကို၀င်ပြီး message setting ထဲက Text message မှာ service center ဆိုပြီးရှိတယ်။ အဲဒီအထဲကမှ service center အသစ်တစ်ခုရွေးလိုက်ပြီး အသစ်မှာ +9595 920003 နဲ့ +95959 10003 တို့ကို ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင် message ပြန်ရနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ အင်တာနက်ဂျာနယ် အတွဲ(9) အမှတ်(28) ဇူလိုင်လ (31)ရက် 2008 ခုနှစ်ထုတ်မှ ထုတ်နှုတ်ထားပါသည်။
ဖုန်းကို ringtone ခဏခဏ ပြောင်းရတာကြိုက်တယ်..
Themeတွေကိုလည်း အမျိုးမျိုးပြောင်းသုံးရတာ သဘောကျတယ်..
ပုံလှလှလေးတွေနဲ့ ringtoneကောင်းကောင်းလေးတွေရှိတဲ့ siteလေးတွေသိရင်ပြောပေးပါနော်..
အရင်က www.mobile9.com , www.zedge.net အဲ့ဒီထဲကနေ ringtoneလေးတွေယူတယ်..
တခြား ကောင်းတဲ့ siteလေးတွေသိတာရှိရင်ပြောပြပေးကြပါဦးနော်.. ။ :5:
skyblue.ster ကဘာ handset သုံးတာပါလဲ...
မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဂိမ်းတွေ၊ ဆော့ဖ်၀ဲလ်တွေကို ဒီလင့်ခ်တွေမှာ သွားဒေါင်းနိုင်ကြောင်းပါ..
ဖွင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ နိုကီယာ ပရိတ်သက်မို့ နိုကီယာဖုန်းအကြောင်းလေးတွေ ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။
ဂီတအသားပေး Nokia ရဲ့ဖုန်း
Nokia ရဲ့ 5320 ဟာ GSM 850/900/1800/1900 နဲ့ WCDMA 900/2100 ကွန်ရက်တွေမှာ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သူ့မှာ Internal Memory 140 MB ပါ၀င်ပြီး MicroSD Card ကို 8 GB နဲ့အထက် ထပ်မံထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Video Player, Music Player, FM Radio တို့ပါ၀င်တဲ့အပြင် ဂိမ်းလည်း ကစားနိုင်ပါတယ်။ GPRS IEDGE တို့ပါ၀င်တဲ့အတွက် Internet အသုံးပြုနိုင်ပြီး WAP 2.0 ဖြင့် Wireless အသုံးပြုနိုင်တဲ့အပြင် Bluetooth နဲ့ USB 2.0 လည်းပါ၀င်ပါတယ်။ဖင်လန်မှာတော့ 195 ယူရိုတဲ့
စျေးနှုန်း - 270,000 ကျပ်၀န်းကျင်
ကျွန်တော် ဖုန်းက Nokia 3110 Classic ပါ။
Massage ပို့တဲ့လိုက်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို ဖုန်းရဲ့ Recently used ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ မှတ်သားထားပါတယ်။
ကျွန်တော်က အဲဒီ Recently used ကို ဖြုတ်ပစ်ချင်ပါတယ်။
ဘယ်နားကနေ ဖျက်ထုတ်ပစ်ရတယ်ဆိုတာကို သိတဲ့သူများရှိရင် ပြောပြပေးကြပါခင်ဗျား။
အစ်ကိုရေ.. ဖုန်းအမျိုးအစားခြင်း မတူတော့ ပြောရခက်ပေမယ့် ရနိုင်မယ်ထင်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်... nokia ခြင်းတူလို့လဲ ရမယ်ထင်ပါတယ်.. မရရင် မရဘူးလို့မှတ်နော်.. စိတ်ဆိုးရဘူး.. ဖြုတ်ပစ်ချင်တာ ဘယ်လိုဖြုတ်ပစ်ချင်တာလဲ.. လုံး၀ဖျက်လိုက်ချင်တာလားမသိ.. ဒါပေမယ့်
recently used ကို မမှတ်စေချင်ဘူးဆိုရင် Messaging --> option -->setting -->other -->Save Sent Message ကို0လို့ပေးထားပြီး.. Number of Saved Message ကို0လို့ပေးလိုက်ပါလား.. အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်..
ကျွန်တော့်ဖုန်းက nokia 6120 classic မှာပါတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်တာပါ.. nokia အများစုက တူလို့ပါ ရရ မရရ ပြန်ပြောပေးပါခင်ဗျာ..
အစ်ကိုရေ.. ဖုန်းအမျိုးအစားခြင်း မတူတော့ ပြောရခက်ပေမယ့် ရနိုင်မယ်ထင်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်... Nokia ခြင်းတူလို့လဲ ရမယ်ထင်ပါတယ်.. မရရင် မရဘူးလို့မှတ်နော်.. စိတ်ဆိုးရဘူး.. :d
စိတ်ဆိုးဘူးလို့ပဲ ပြောပါရစေတော့ ကိုကို၀င်းရေ။
ပြန်လည်ဖြေကြားပေးတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူး ဂေါ်ဇီလာပါ။
နောက်လည်း ဖုန်းနဲ့ ပါတ်သက်ပြီးတော့ မသိတာတွေရှိရင် မေးအုန်းမယ်နော်။
ဦးကိုကိုဝင်း ဖြေ တာနဲ့ရတယ်မရ ဘူးဆိုတာပြောအုံးမှပေါ့:14:
ဒီလိုစိတ်ကူးမျိုးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ.. ကျွန်တော်တို့လညး်ပိုပြီးတော့ ယူစရာများသွားတာပေါ့.. ဟီးဟီး...
[email protected] :D:D:D:D:D:D:D:D
အကိုတို့ ရေမိုက်တယ်ဗျို့ ။ ကျုပ်လည်း မိုဘိုင်းဖုန်း အရောင်းဆိုင်မှာ လုပ်နေပါတယ် ၊ ကျွန်တော်သိတာလေးတွေလည်း ဖြေပေးပါ့မယ်။ ဆော့ဖ်၀ဲလ်တွေလိုချင်ရင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီပါ့မယ်။ အားမနာတမ်း တောင်းကြနော်။ :6:ကျွန်တော့်ဆီမှာ N95 , N79 , N85 ,N96 ,E66 ,E71 .....GPS ပါတဲ့ဖုန်းတွေကို ထည့်ပေးနေတယ်နော် ၊ GPS ပါတဲ့ ဖုန်းတွေကို လည်း ၀ယ်ရင် အလကားထည့်ပေးထားတယ်ဗျ ။ ဒါကျွန်တော်ကူညီနိုင်တာတွေပါ ။ ကျွန်တော်အကူအညီ လိုရင်လည်း ၀ိုင်းခေါင်းစားပေးကြဦးဗျ ။ အခု တောင် 5800 XPRESS MUSIC ကို ဆော့ဖ်၀ဲလ် ထည့်မရလို့ ခေါင်းစားနေတယ်ဗျ ။ EXPIRE CERTIFICATE ပြနေလို့ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ စားနေတာဗျ။ သိတဲ့သူရှိရင်လည်း ကူညီကြပါဦးဗျာ။ နောက်တစ်ခုက xxx.jar , xxx.jad နဲ့ ဆုံးတဲ့ဖိုင်တွေက trial version ပဲရတာကို crack လုပ်လို့ရလားဗျ ။ full vertion ပြောင်းချင်တာ ဘယ်သူကို အကူအညီတောင်းရမလဲဗျ။လုပ်တတ်ရင်လည်း ကူညီပေးကြပါလားဗျာ။ (:((:((
iphone third party application ကိုဘယ်လို ထဲ.ရမလဲ။
iphone third party application ကိုဘယ်လို ထဲ.ရမလဲ။ :1:
ဒီလင့်ခ်လေးမှာ သွားကြည့်ကြည့်ပါလား... အဆင်မပြေရင် သွင်းချင်တဲ့ ဆော့ဖ်၀ဲလ်နာမည်လေးပါ ပြောပေးပါလား.. ရှာပေးပါ့မယ်... ) ဒီလို ပါ၀င်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ.. အခြားသိသူများလည်း ဖြေကြားပေးပါဦး.....
iphone software လေးတွေပါ... သုံးကြည့်ကြပါခင်ဗျာ..
:101:Nokia E71 သုံးတဲ့ယူဇာတွေအတွက် ဒီမှာသွားကြည့်ကြပါ E 71 အတွက် ဆွေးနွေးချက်တွေ ပါ၀င်တဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ ringtone တွေကအစ ရနိုင်ပါတယ်..:101: :):)
kokomgyezaw wrote: »
အကိုတို့ ရေမိုက်တယ်ဗျို့ ။ ကျုပ်လည်း မိုဘိုင်းဖုန်း အရောင်းဆိုင်မှာ လုပ်နေပါတယ် ၊ ကျွန်တော်သိတာလေးတွေလည်း ဖြေပေးပါ့မယ်။ ဆော့ဖ်၀ဲလ်တွေလိုချင်ရင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီပါ့မယ်။ အားမနာတမ်း တောင်းကြနော်။ :6:
အခုလို စကားလုံးလေးတွေကြားရတာ အရမ်းအားရတာပဲ။ ကျနော် Nokia 6300 ကို Black List software လေးများရနိုင်မလား? ကျနော်တော့ ရှာတာနှံ့နေပြီဗျ။ ဆော်၀ဲလ်မဟုတ်လဲ တခြားနည်း လမ်းလေးများရှိရင် မျှပါဦးနော်။
အစ်ကိုရေ....ဒီလင့်ခ် မှာတော့ အလကားပေးတယ်ပြောတာပဲ....ဒါပေမယ့် ဘန်းထားတယ်:D:2::((..ဘန်းကျော်ပြင်ပက လူကိုဒေါင်းခိုင်း ဒါမှမဟုတ် ကျော်လိုက်ပေါ့နော်....ကျွန်တော်အရောက်ပို့ပေးချင်ပေမယ့် ကျော်မရလို့ နားလည်ပေးပါနော်..:):)
သင်္ကြန်တွင်းကာလပြီးဆုံးရင် မိုးဦးရာသီကိုရောက်တော့မယ်....မိုးရာသီနဲ့ပတ်သက်လို့မိုဘိုင်းဖုန်းတွေရဲ့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေပါ..
သင်္ကြန်တွင်းမှာဖုန်းသုံးရင်တော့ ဖုန်းရေစိုခံအိတ်လေးတွေနဲ့သုံးကြပါတယ်..တကယ်ခံမခံစမ်းဖူးဘူး..ကြောက်လို့..:D ဘာပဲပြောပြောဒီတိုင်းယူသွားတာထက်စာရင် ရာနှုန်းပြည့်နီးပါးပိုစိတ်ချရပါတယ်...အဲဒါပေမယ့်ရေစိုသွားပြီဆိုတာနဲ့ ပါ၀ါကိုချက်ချင်းပိတ်ပါ...ရသေးလားဆိုပြီးထက်မဖွင့်ကြည့်မိဖို့ ဂရုပြုပါ...battery ကိုဖြုတ်ပါ...နီးစပ်ရာဆေးခန်း..အဲ..မှားလို့..နီးစပ်ရာဖုန်းဆိုင်ကိုပြေးပြီး ပြင်ကြပါ...ကိုယ့်ဘာသာကိုကလိတာထက်တော့အများကြီးကောင်းပါတယ်လေ...:D
မိုးရာသီ..မိုးရေထဲလမ်းလျှောက်နေချိန်မှာ ဖုန်းပြောမယ်ဆို လမ်းလယ်ခေါင်မှာထီးထီးကြီးဖြစ်မနေပါစေနှင့်...မိုးကြိုးပစ်ခံရတတ်လို့ပါ...တရုတ်ပြည်မဟာတံတိုင်းကြီးပေါ်မှာ မိုးရွာသွန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ချိန်တွင် မိုဘိုင်းဖုန်းပြောသဖြင့် မိုးကြိုးပစ်ခံရသူများ များပြားသောကြောင့် မိုးရွာချိန်တွင် မိုဘိုင်းအသုံးပြုခွင့်မပေးဟုပင် စာစောင်တစ်ခုတွင် ဖတ်ခဲ့ရပါသည်..
ဖြစ်နိုင်လျှင် ဖုန်းကိုသင်္ကြန်တွင်းကလိုပင် ရေစိုခံအိတ်လေးထဲထည့်သင့်ပါသည်..မတော်တဆ ရေထဲပြုတ်ကျခြင်းမှလဲ..ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ပါသည်..(မယူချင်ဘဲရေထဲပစ်ချလဲဖြစ်ပါသည်..သွားပေရော့တစ်လုံးပေါ့ )
ဒီမှာက အမ်ဇက်မိုဘိုင်း dictionary လေးပါ...အမ်ဇက်ရဲ့ ပရောဒတ်ပဲပေါ့ဗျာ....ဖုန်းသုံးသူတိုင်းသွားရောက်အားပေးလိုက်ပါဦး..
လိုချင်တဲ့ file ကိုပြောပါ.. အဲ site ကနေပြောတာပါ.. ဒေါင်းပြီး တစ်နေရာရာမှာ တင်ထားပေးပါ့မယ်ယ.. အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ \_:D/
ကျွန်တော် လဲပါတယ်။ ၃ မဲ။ ဟီးဟီး။
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း Screen Capture Application
ကျနော်တို့ရဲ့PC/Laptop စတဲ့ ကွန်ပြူတာတွေမှာ Screenshot တို့ .. Print Screen တို့ လိုမျိုး ..
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွေမှာလည်း အလားတူ ..
မိမိတို့ဖုန်းထဲက လုပ်ဆောင်ဖော်ပြနေတဲ့ Screen တွေကို Screenshot ပြီး လုပ်ချင်တာမျိုး သိမ်းထားချင်တာမျိုးရှိလို့ သုံးချင်ရင် ..
ဖရီးပေးထားတဲ့ ဆော့ဝဲ Application ကတော့ ..
သူ့ရဲ့ဝက်ဆိုဒ်မှာ အလွယ်တကူ သွားရောက် ဒေါင်းလုဒ်ချပြီး မိမိတို့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွေထဲ အဆင်ပြေပြေ အင်စတောလုပ် အသုံးပြုနိုင်ပါမည်။
Version အမျိုးမျိုး ရှိပြီး Compatible Phone Devieces အမျိုးအစားများ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးထားရာ ..
စမ်းသုံးကြည့်ချင်သူများ ..မိမိတို့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း မော်ဒယ်အမျိုးအစားများနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဒေါင်းလုဒ်လင့်ခ် စာမျက်နှာတွေကို အောက်မှာ တစ်ခါထဲ ရေးပေးလိုက်ပါမည်။
Best Screen Snap version 1.01
(Series 60 ဖုန်းမော်ဒယ် အမျိုးအစားများအတွက်)
သွားရောက်ဒေါင်းလုဒ်ယူရန် နေရာ >>>>
( ဒေါင်းလုဒ်ဖိုင် Size အရွယ်အစား ။ ။ SIS file: 21.94 KB သို့မဟုတ် ZIP file: 21.1 KB )
Compatible devices (သုံးနိုင်သော ဖုန်းအမျိုးအစားများ):
Nokia 3230, Nokia 3600, Nokia 3620,
Nokia 3650, Nokia 3660, Nokia 6260,
Nokia 6600, Nokia 6620, Nokia 6630,
Nokia 6670, Nokia 6680, Nokia 6681,
Nokia 6682, Nokia 7610, Nokia 7650,
Nokia N70, Nokia N72, Nokia N90,
Nokia N-Gage, Nokia N-Gage QD, Panasonic X700,
Panasonic X800, Samsung SGH-D730, Samsung SGH-D720,
Sendo X, Siemens SX1
(S60 3rd edition ဖုန်းမော်ဒယ် အမျိုးအစားများအတွက်)
( ဒေါင်းလုဒ်ဖိုင် Size အရွယ်အစား ။ ။ SISX file: 53.87 KB သို့မဟုတ် ZIP file: 54.06 KB )
(S60 5th edition ဖုန်းမော်ဒယ် အမျိုးအစားများအတွက်)
( ဒေါင်းလုဒ်ဖိုင် Size အရွယ်အစား ။ ။ SISX file: 39.01 KB သို့မဟုတ် ZIP file: 39.17 KB )
ထူးခြားချက် ။ ။
( Symbian OS ကို ခုနောက်ပိုင်းမှ မော်ဒယ် (Idou) မှာ ပထမဆုံး စတင် ထည့်သုံးပေးလာတဲ့ Sony Erricsson ဖုန်းတွေအတွက်တော့ မပါသေးတာ တွေ့ရပါမယ်ခင်ဗျ။
သိတဲ့အတိုင်းပဲ ဆိုနီက Java ရိုးရိုးဖုန်းအမျိုးအစားစနစ်သာ ထုတ်တာများခဲ့လို့ .. ဒီဇိုင်းလှပ..entertainment အပိုင်းတွေကြောင့် လူကြိုက်များလှသော်လည်း ဆော့ဝဲ Application အကြီးစားများ ထည့်သွင်း Runလို့ မရ .. ခက်ခဲသလောက် .. ရိုးရိုး Java Application များသာထည့်သွင်းသုံးနိုင်ခဲ့သေးတာကြောင့် မပါတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါမည် ..
ခုနောက်ပိုင်း ဆိုနီလည်း အသည်းအသန် အပြေးအလွှား Symbian OS ဖုန်းအမျိုးအစား..Window OS သုံး ဖုန်းအမျိုးအစားတွေ ထုတ်လာတော့ .. ဆိုနီဖုန်းတွေအတွက် မျှော်လင့်စရာ အသုံးချဆော့ဝဲ ကောင်းကောင်းလေးတွေ တွေ့ရတော့မည်ပေါ့ вЂ¦ ကျနော့်အမြင်သက်သက်သာ။ )
Best Screen Snap (User Guide) စာမြည်း (၄င်းဝက်ဆိုဒ် မှ) вЂ“
вЂў You can select one of 14 available hotkeys to makeascreenshot.
вЂў After the application makesascreenshot you hear camera click sound to notify you.
вЂў You can save screenshots as true colour BMP, 256 colour BMP, and JPG. For JPG you can select the image quality (the worser quality the smaller the file size).
вЂў Action: you can select action to be performed after taking screenshot. Save the image to disk or immediately send it via Bluetooth, Infrared, multimedia message or email.
вЂў You don't have to type the file name each time you takeascreenshot, you can specify the base file name of the screenshot image files. application will automatically appendaunique number to the base filename. E.g. src000001.jpg, src000002.jpg, src000003.jpg etc.
вЂў Taken images are saved directly to your Images folder. That allows you to browse, view and delete taken screen shots withabuilt-in picture viewer application.
вЂў The application allows you to selectafolder in Images section where your screenshots will appear in order to differentiate your screenshots from other images like your camera photos, etc
вЂў You can configure screenshots to be stored on the internal phone disk or on the memory card.
вЂў Best ScreenSnap is FREE! You can download and use it absolutely free of charge. No spyware and adware inside.
(မြန်မာမိသားစု ဖိုရမ်တွင် ဖော်ပြပြီး ))
ယခုအပတ်ထုတ်အင်တာနက်ဂျာနယ်တွင် ဒေါ်လာငါးဆယ်တန် Prepaid card များကို ဇွန်လဆန်းတွင် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းပါရှိလာပါသည်.. ထို ဖုန်းကတ်သည် ယခင်ကတ်များနှင့်မတူဘဲ ကမ်းရိုးတန်းဖုန်းကတ်သာ ဖြစ်သဖြင့် ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းများဖြင့် အသုံးပြု မရနိုင်ကြောင်း၊ နံပါတ်အသေမဟုတ်ဘဲ တစ်ခါသုံး နံပါတ်သာဖြစ်ကြောင်း၊ မသုံးဘဲထားလျှင် သုံးလခံပြီး ကတ်ချိုးပြီးပါက ရက် 60 အတွင်း သက်တန်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပါရှိသည်။ (ဖြစ်ကြောင်းတွေများကုန်ပြီ ) ဖုန်းခေါ်ဆိုခများမှာ...
ပြည်တွင်း အထွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုခ............................................ .30 FEC
ပြည်တွင်း အ၀င်ဖုန်းခေါ်ဆိုခ ............................................. .05
စင်ကာပူနှင့်ထိုင်းနို်င်ငံ ............................................. .09
အခြားပြည်ပနိုင်ငံများ ............................................. 1.50
Message အထွက်မှာ .05 FEC ကျမည်ဖြစ်သည်..။
ထိုဖုန်းများကို ယခင်ဖုန်းကတ်များ ရောင်းချသော ဆိုင်များတွင်ပင် ဇွန်လ2ရက်မှ စတင်ရောင်းချပေးမည်ဟု ဖုန်းရောင်းသည့်ဆိုင်များမှ သိရသည်... ရောင်းချပေးမည့် Company မှာ Central Marketing Company ဖြစ်သည်....
ထိုဖုန်းများကို CDMA 450 ကဒ်ဖုန်းများ သုံးသည့် ဖုန်းများတွင်သာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်.. GSM ဖုန်းများနှင့်သုံးနိုင်မည် မဟုတ်ပေ.. ထိုကဒ်ဖုန်းနံပါတ်များမှာ 09477xxx (or) 0948xxxx နံပါတ်များဖြင့် စမည်ဖြစ်ပြီး...စုစုပေါင်း ဂဏန်းရှစ်လုံးပါ၀င်မည်ဖြစ်သည်.. CDMA to CDMA message ပို့နိုင်ပြီး CDMA to GSM message (or) GSM to CDMA message ပို့နိုင်မည် မဟုတ်ပါ.. ထိုဖုန်းများကို လိုသလောက်ရောင်းပေးသွားမည်ဟု သိရသည်..
အကိုး။ ။ အင်တာနက်ဂျာနယ်..
ဒါက Home made Ringtone လေးပါ.. ပလွေသံကို တရုတ်သံစဉ်အဖြစ်တီးမှုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်.. နားထောင်လို့ ကောင်းပါတယ်...
အခုတလော လိပ်မလေး theme လှလှလေးတွေ လိုချင်တဲ့အခါ
ဒီထဲကနေယူပါတယ်.. www.ownskin.com ယူရတာလည်းလွယ်တယ်..
Games ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက် game လေးတွေလည်းရှိပါတယ်..
www.zedge.com လဲကောင်းပါတယ်... မန်ဘာ၀င်ပြီးရင် themes တွေကော.. ကျန်တာတွေပါ.. တော်တော်ဒေါင်းလို့ရပါတယ်...
Hi! do u have Yangon GPS map for garmin mobile Xt.For expire certificate,I think it can be solved by change the date in phone.
.jar .jad ဆုံးတဲ့ ဖိုင်တွေကို full version ပြောင်းလို့ရမယ်ထင်တယ်... သေချာတာကတော့ ကိုယ်ရှာချင်တဲ့ application name ရယ် crack ရယ်ကို တွဲရိုက်ပြီး ရှာကြည့်လိုက်ပါ.. ကက်စပါစကီးတောင် crack ရသေးတာပဲ.. တစ်ခြားဟာတွေလဲ ရမှာပါ..
ဒါနဲ့ အစ်ကို ... ကျွန်တော့်ဖုန်းက Nokia 6120 classic ပါ.. သူ့ကို GPS ထည့်ဖို့ ဆော့ဖ်၀ဲလ်လေးများရှိလားမသိဘူး.. ရှိရင်ပေးပါဦး..:D
Nokia N82 အတွက် Germain GPS Software ဘယ်လိုသွင်းရမလဲဗျို. အဲ.ဒီ software ကို ဘယ်ကဒေါင်းရမလဲ ပြီးတော. မြေပုံတွေပါတစ်ခါတည်းမစပါနော် (တောင်းဆိုတာတွေများသွားပြီထင်တယ် ပြန်ဖြေပေးကြဦးနော်) :77::77::77:
မှန်ပါတယ်ဗျို့ ဒီအခန်းကိုထည့်သင့်တယ် ထောက်ခံပါတယ် လူကြီးမင်းများလက်ခုပ်တီးပါ :d:5:
အကိုရေ.. ကိုစေတန်က ဒီတောင်းဆိုချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီးပါပြီ. မိန်းပေ့ချ်မှာ သေချာကြည့်ပါခင်ဗျာ..
mobile role group လေးလုပ်ပါခင်ဗျာ....ထောက်ခံမဲပေးပါတယ်ခင်ဗျာ.....
softwear က expire ပြနေရင် ဖုန်းရဲ့date ကို နှစ်ကနေစပြီးလျော့လိုက်ပြန်ပြီးသွင်းလိုက်...နှစ်လျော့ပြီးလို့မရရင် လကိုလျော့ပြီးလုပ်ကြည့်ပါလား..ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်များများအဲဒီအတိုင်းလုပ်တာအဆင်ပြေတယ်....
ကောင်းပါတယ် အခုလိုမျိုး မြန်မာနိုင်ငံမှာ blogspot တွေဖွင့်မရတော့ MZ မှာပဲပိုစ်တင်ရတော့မယ်နဲ့တူတယ်..ကိုယ်ကမြန်မာတွေအတွက်တင်ချင်တာလေ..အခု နောက်ဆုံးပေါ်OS Android နဲ့ပတ်သက်တာတွေကို လေ့လာနေပါတယ်.. ဒီOS ကတော်တော်လေးကိုသွက်တာဗျ..ကျွန်တော့်ရဲ့အရင်လင့်ဖြစ်တဲ့ http:softlovesky.blogspot.com မှာတင်ထားပါတယ်..ဒါပေမဲ့ အဲမှာက ဆော့၀ဲလ်တွေရော ရုပ်ရှင်တွေကော ဖြစ်နေတော့ ရှုပ်တာ နဲ့ အသစ်တစ်ခုလုပ်လိုက်ပါတယ်.. အဲမှာ သွားကြည့်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..နောက်လိပ်စာအသစ်က http:androidnsoftlovesky.blogspot.com ပါခင်ဗျာ...
Please help me. I want to remove some applications preinstalled in my mobile phone. I'm using Huawei C5900 CDMA 800MHz phone.